အမေစုရဲ့ လက်ရှိ ကံကြမ္မာကို ဆရာ စံဇာဏီဘို ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပြီ… – Real News
အမေစုရဲ့ လက်ရှိ ကံကြမ္မာကို ဆရာ စံဇာဏီဘို ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပြီ
အကြောင်းအရာကတော့ ၈ရက်နေ့ ဒီနေ့နဲ့ မနက်ဖြန် ၉ရက်နေ့မှာ အရာရာသတိနဲ့ယှဉ်ရတော့မယ်။ ၁ဝရက်နေ့မှာ ဂြိုလ်ခြောက်လုံးသွားပူးမယ်။ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ ဂြိုလ်ခြောက်လုံးပူးမယ်
အဲ့ဒီချိန်မှာ အင်တိုက်အားတိုက် သုံးရက်ရှိတယ်။ ၁ဝရက် ၁၁ရက် ၁၂ ရက် အဲ့ဒီရက်သုံးရက်မှာ အားအင်အပြည့်နဲ့ ဆက်လက်ပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်မယ်ဆိုရင် အခြေအနေထူးခြားစွာ ကောင်းမွန်မယ်။…..နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဇာတာမှာ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်က မူလလအနေအထားမှာ အင်မတန်အားကောင်းပြီးတော့ အခြေအနေမြင့်မားစွာတည်ရှိနေတဲ့သဘာဝ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ် ။
ဇန်နဝါရီ ၃၁ကစပြီးတော့ အမေစုပေါ်မှာ မတရားတိုက်ခိုက်ပြီး အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့အနေအထားကိုရောက်တာ။…. ၂၁ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီမှာ အတည့်ပြန်သွားမှာ။ အဲ့ကျရင် အမေစုရဲ့ကံကြမ္မာကို ဘယ်သူမှထိန်းချုပ်လို့မရပဲ အတည့်ပြန်သွားမယ်။ ဒီအနေအထားမှာ အားလုံးက ကောင်းသောဆုတောင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်….ဆက်လက်သိရှိရန် ဗွီဒီယိုကြည့်ပါ
အကြောင်းအရာကတော့ ၈ရက်နေ့ ဒီနေ့နဲ့ မနက်ဖြန် ၉ရက်နေ့မှာ အရာရာသတိနဲ့ယှဉ်ရတော့မယ်။ ၁ဝရက်နေ့မှာ ဂြိုလ်ခြောက်လုံးသွားပူးမယ်။ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ ဂြိုလ်ခြောက်လုံးပူးမယ်။
အကွောငျးအရာကတော့ ၈ရကျနေ့ ဒီနနေဲ့ မနကျဖွနျ ၉ရကျနမှေ့ာ အရာရာသတိနဲ့ယှဉျရတော့မယျ။ ၁ဝရကျနမှေ့ာ ဂွိုလျခွောကျလုံးသှားပူးမယျ။ ဗုဒ်ဓဟူး၊ ကွာသပတေး၊ သောကွာ၊ စနေ၊ တနင်ျဂနှေ၊ တနင်ျလာ၊ ဂွိုလျခွောကျလုံးပူးမယျ
အဲ့ဒီခြိနျမှာ အငျတိုကျအားတိုကျ သုံးရကျရှိတယျ။ ၁ဝရကျ ၁၁ရကျ ၁၂ ရကျ အဲ့ဒီရကျသုံးရကျမှာ အားအငျအပွညျ့နဲ့ ဆကျလကျပွီးတော့ ပွိုငျပှဲဝငျနိုငျမယျဆိုရငျ အခွအေနထေူးခွားစှာ ကောငျးမှနျမယျ။…..နိုငျငံတျောခေါငျးဆောငျအမဒေျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ ဇာတာမှာ ဗုဒ်ဓဟူးဂွိုလျက မူလလအနအေထားမှာ အငျမတနျအားကောငျးပွီးတော့ အခွအေနမွေငျ့မားစှာတညျရှိနတေဲ့သဘာဝ ပိုငျဆိုငျထားတယျ ။
ဇနျနဝါရီ ၃၁ကစပွီးတော့ အမစေုပျေါမှာ မတရားတိုကျခိုကျပွီး အနှောကျအယှကျပေးတဲ့အနအေထားကိုရောကျတာ။…. ၂၁ရကျနဖေ့ဖေျောဝါရီမှာ အတညျ့ပွနျသှားမှာ။ အဲ့ကရြငျ အမစေုရဲ့ကံကွမ်မာကို ဘယျသူမှထိနျးခြုပျလို့မရပဲ အတညျ့ပွနျသှားမယျ။ ဒီအနအေထားမှာ အားလုံးက ကောငျးသောဆုတောငျးခွငျးကို ဆောငျရှကျပေးရမယျ….ဆကျလကျသိရှိရနျ ဗှီဒီယိုကွညျ့ပါ
အကွောငျးအရာကတော့ ၈ရကျနေ့ ဒီနနေဲ့ မနကျဖွနျ ၉ရကျနမှေ့ာ အရာရာသတိနဲ့ယှဉျရတော့မယျ။ ၁ဝရကျနမှေ့ာ ဂွိုလျခွောကျလုံးသှားပူးမယျ။ ဗုဒ်ဓဟူး၊ ကွာသပတေး၊ သောကွာ၊ စနေ၊ တနင်ျဂနှေ၊ တနင်ျလာ၊ ဂွိုလျခွောကျလုံးပူးမယျ။